Kartepe Nguva yechando Mutambo - Mufaro, Ruzivo uye Zviitiko Zvinokumirira paKarfest | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara41 KocaeliKartepe Nguva Yechando Mutambo - Karfest Mufaro, Vateveri uye Action Kumirira Iwe
17 / 01 / 2020 41 Kocaeli, GENERAL, Dunhu reMarmara, TURKEY, TELPHER
kartepe kis festival karfestte mufaro wekunakidza uye chiitiko chakamirira iwe
Karfest, iyo ichaita zviitiko zvekunakidzwa uye zviratidziro kubva kune imwe neimwe muKartepe, kero yekushanya kwechando, ichaitirwa muSisli Valley Mugovera, Ndira 18th pakati pe14.00-24.00. Chisingakanganwiki dj maitirwo, laser mwenje inoratidzwa, mimhanzi mhenyu, mitambo, kukwikwidza, vemunharaunda maartist, sosi-yechingwa pati, inobata kukudziya iwe uye zita rakakurumbira remimhanzi yepop İrem Derici concert ... Mune yakasarudzika mamiriro; kushambidzika, kufara, kusununguka uye mufaro wakamirira vanhu veKocael muKarfest…
10 HURE DZINOGONESWA DZESVONDO
Muguta rekushanya reKocaeli, nguva yechando inouya mupfungwa uye Kartepe anouya mupfungwa. Mumwe chete kero chando Tourism muTurkey Kartepe, zvino kugadzirira itsva mafaro. Kartepe Nguva yechando Mutambo-Karfest uchaitirwa kuMaşkiye Sisli Valley neMugovera, Ndira 18th. Vatori vechikamu paKarfest vachazadzwa nekusanzwisisika kufara, kushambadzira uye chiitiko kwemaawa gumi pakati pegumi nemana 14.00-24.00.
Kutanga KUSI KUPEDZIRA
Kocaeli, iyo ine basa rakaparadzana rinenge mazuva ese egore, yakagadzirira mutambo wekutanga wechando. Yakarongedzerwa mukubatana neKocaeli Metropolitan Municipality uye Kartepe Municipality, Kartepe Winter festival-Karfest ichavhura masuo ayo kune vanoda chando kekutanga gore rino. Chiitiko ichi, chichaitika muSisli Valley, chimwe chezvakanaka kwazvo zvemigwagwa yeKartepe summit, ichave yakajairwa Kocaeli neKartepe mumakore anotevera.
IZVI ZVISINA KUKARARA!
Kocaeli Metropolitan uye Kartepe maseneta akagadzirira rakasarudzika mutambo mutambo kune avo vanoda kunakidzwa panechando. Kune avo vanoenda kumutambo kamwechete, zvuru 2000 pine muti pine miche ichagoverwa kutsigira girini Kocaeli. "Laser" mwenje mwenje unovhenekera husiku. Vanoda kunakidzwa vanotamba mumoyo yavo pamwe nekurarama kuita kwaDJ Mert Erdoğan. Cenk Sarıkaya, mumwe wevaridzi venhepfenyuro yeRadio Traffic Marmara, achaendawo kumutambo uyu.
ACIKANA SUKUK-BUDA, KUTI TIYA-MHARA
Zvese zvinodiwa zvevagari vedu vanozotora chikamu mumutambo zvinoonekwa zvakanyanya. MuKarfest, inozove yakavezwa nechitambi chakaitwa nevatambi venzvimbo uye mapoka, vangangosvika zviuru gumi, vatinotarisira kutora chikamu mumutambo uyu, vachashandiswa pamakona mana akasiyana nemipiro yeKartepe Municipality nevematunhu mhizha. Uye zvakare, inopisa tii, soup uye halva zvibate zvakare zvichaitika munzvimbo iyi.
In Karfest; Kubva pane chekufambisa kuenda kupaki, tii kune supu, toboggan skating kuenda kumakwikwi, kubva kumakonzati kuenda kune sausage yechingwa inobata, zvese zvakasununguka kubva pakutanga kusvika pakupera. Iko hakuna chando pamutambo uyu. Nzvimbo yedu yechiitiko ichapiswa mumutambo wese nehuni huni kuti uzororwe nekusingaperi uye kuburikidza nemabha makumi maviri neshanu ...
VANA VANODA IZVI ZVESVIDZO
Vagari vedu vanouya kumunda vanobatika mumakwikwi uye nezviitiko zvakaita se "Boat Race", "Rope Pulling Race", "Penguin Running" uye "Lantern Regiment", "squirrel", "Snowman" Wedu '' uye '' Penguin '' mascots achafadzawo vashanyi vedu vadiki mumutambo wese. Isu tine zvakare pikicha yekupfura nzvimbo apo vatori vechikamu vanozoisa mupfungwa dzavo dzakanakisa.
Kana Karfest ichiratidza pa19.00: 24.00, zita rinozivikanwa remimhanzi yepop İrem Derici konsati ichavamba. Muimbi ane mukurumbira achaimba nziyo dzake, idzo dzakagara mumitauro yakadai se '' Ndiye chete muridzi wemoyo wangu '', '' Wakatanga hove '', '' Wona muchato wako '' nevateveri vake. Ne conco ya İrem Derici, mutambo uyu, apo varaidzo ichave iri pamusoro pazvo, ichaenderera mberi nezviitiko zvinoyevedza kusvika XNUMX:XNUMX.
Hapazovazove nematambudziko mukufambisa
Matanho ese akakodzera akatorwa neDhipatimendi reZvekufambisa reMetropolitan, Dunhu reKartepe, Dhipatimendi reMapurisa eRuwa neDunhu Gendarmerie Command kunzvimbo yemigwagwa uye munzvimbo yekufambisa. Kuti udzivirire matambudziko emumigwagwa, Metropolitan uye Kartepe Municipality timu; Ichachengeta migwagwa yese yakabatana neye summit kubva kuMaşukiye-Derbent uye Suadiye- Arslanbey yakavhurika yekufambisa. Kubuda kubva pakati peMaşkiye kuchavharwa traffic kusvika 15:00. Basa redu remabhazi, iro riri muMaşukiye square, tichaunza vese vashanyi vedu vanosvika panguva ino kuburikidza nemotokari dzakazvimirira kana zvifambiso zvevazhinji kunzvimbo yemutambo na11: 00. Nongedzo dzakakodzera dzichapihwa kune vashanyi nevazhinji vashandi uye kuzivisa nhanho munzvimbo yechiitiko kubva kumaguta maviri ese.
ZVESE ZVESE ZVINOGONESA
Vashanyi vedu vanouya nemotokari dzavo dzakavanzika vachakwanisa kushandisa Maşkiye Musika, Maşkiye Migros nenzvimbo dzekutamba dzezvikoro zvemitambo yemahara. Kutanga kubva na13: 00 Kartepelis, kuchinjirwa kuchazopihwa nzvimbo yekusangana paMaşukiye Meydan nemasevhisi eawa imwe neimwe. Zvikwata zvedu zvemapurisa zvinoshanda munzvimbo dzinokosha dzemigwagwa uye traffic traffic uye kuchengetedzwa. Yese inofanirwa matanho akatorwa kuitira kuchengetedza kwevatori vechikamu uye vana munzvimbo yemutambo.
14:00 Kuvhurwa kweMutambo uye DJ kushanda
16:00 Gül White Iron Konsati
16:50 Kartepe Municipality Folk Dance Group (Moto weAnatolia)
18:00 Protocol hurukuro uye Ribhoni kutemwa
18:15 Atesbaz Stage Ratidza
21: 00 - 23: 00 Local Artists-Horon Show
15: 45 Boat racing
18:10 Tambo Inodhonza Mujaho
18:30 Penguin Kumhanya
18:50 Chiedza cheRightouse
Kartepe Nguva yechando Mutambo KarFest Mufaro Unotanga
10 Zviuru Kartepe Nguva yeChando Mutambo Unonakidzwa naKarfest
Uyai ndirege ndikufambei mumugwagwa
Denizli Mutambo Wakawanda Anova Idzva Idzva Idzva Rokutsvaga Vachida
Maintenance Break paBalçova Cable Car uye Adventure Park
Veruzhinji Vatyairi Vanofambisa Vanosangana kuChitungwiza Park
Kartepe Ski Center Kurindira Snow
European Standards Inokodzera CEN Olympos Cable Car Inyanzvi Inofadza
Kula kabhadhi car project yakagadzirisa ruzivo munharaunda
Mufaro unotanga kuSaklıkent Ski Center
Olympos Ropeways Inyanzvi Inofadza
Kufukurwa muIstanbul pamwe nekutsvakwa kwaMarmaray
Karfest Chirongwa chinoyerera
Kartepe Nguva yechando Mutambo